Warar - Talooyin ku saabsan in aan lagu daadin dhogor dhogorta dhogorta leh
1. Xeeladda dhogorta dhogorta leh ee aan timaha daadineynin: Kala milanka qaado oo istaarijka ah oo ku jirta kala badh weel biyo qabow ah, ku qoyso dhogorta dhogorta leh oo la soo bax iyada oo aan qalloocin, ka daadi oo dhig biyo qaddar yar oo maydha. budo, ku qoy 5 daqiiqo. shabaqa
2. Lakab khafiif ah oo miisaan ah ayaa ku sameysmi doona dheriga aluminium ama dheriga aluminium muddo kadib. Geli maqaarka baradhada gudaha, ku dar qaddarka ku habboon ee biyaha, karkari, kari ilaa 10 daqiiqo, ka dibna saar.
3. Dabaqa jikada wuxuu leeyahay saliid badan mana sahlana in la nadiifiyo. Kahor intaadan xaaqin dhulka, waxaad ku qoyn kartaa dhulka saliida leh biyo kulul si aad u jilciso nabarrada, ka dibna ku shub xoogaa khal ah xaaqka, ka dibna dhulka ku xoqo si aad uga saarto wasakhda saliida leh ee dhulka ku jirta.
4. Ka dib markaad shidato shidaalka si aad u shido, haddii ololku cagaar yahay, waxaa loola jeedaa in gaasku si aan dhammeystirnayn u gubtay, taas oo gaaska baabi'ineysa. Waqtigaan, waxaa lagugula talinayaa inaad ku hagaajiso waalka kontoroolka hawada meesha uu ololku ka dhawaaqayo.
5. Markaad isticmaaleyso kuleyliyaha biyaha, waxaa ugu wanaagsan in la hagaajiyo heerkulka u dhexeeya 50-60 digrii, taas oo ka hortagi karta sameynta miisaanka kululeeyaha biyaha; marka heerkulka biyuhu ka bato 85 darajo, samaysanka cabbirka ayaa kordhi doona.
Waqtiga boostada: Meey-10-2021